स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले २९ जना कार्यकर्तालाई सर्विलेन्स अफिसर नियुक्त गरे, मासिक ३० हजार तलब र १५ सय भत्ता
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका बेला सरकारमा बस्नेबाट राज्यकोष दोहनको शृंखला रोकिएको छैन । स्वास्थ्य विपत्को बेला सबैभन्दा व्यस्त र कार्ययोजना ल्याउने काम स्वास्थ्य र अर्थमन्त्रीको हो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल गुमनाम छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा भने जेठ २५ गतेभित्रै सबै कर तिर्न उर्दी जारी गरेर विवादमा आएका छन् ।
केही समयसम्म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोनाभाइरसबारे सार्वजनिक मिडियामा बोल्नै छाडेका छन् । दिनदिनै कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै गएको छ । आजसम्म २२ सय मानिस संक्रमित भइसकेका छन् । तर, स्वास्थ्यमन्त्री भने कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि योजना ल्याउन भन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवान लागिपरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले २९ जना पार्टी कार्यकर्तालाई सर्विलेन्सको अफिसर नियुक्त गरेका छन् । मासिक ३० हजार तलब (यातायात भत्ता) र दैनिक १५ सय खाजाखाना खर्च दिने गरी उनले नियुक्ति दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए । नियुक्त भएकाका लागि सातवटै प्रदेशमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि पठाइएको छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमितसँग कन्ट्याक्टमा आएकाबारे विवरण लिन निजामती कर्मचारी र नेपाल प्रहरी प्रयोग गर्न सक्छ । तर, अहिलेसम्म उनीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको छैन । राज्यकोषको पैसा खर्च गर्ने गरी मन्त्री ढकालले किन बाहिरबाट नियुक्त गरी प्रदेशमा पठाए ? भन्ने विषय अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चर्चाको विषय बनेको छ । जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सयौं कर्मचारी काम नपाएर घरमै बसिरहेका छन् ।
वैज्ञानिकले बनाए कोरोनाभाइरस नष्ट गर्ने ‘क्याच एण्ड किल’ फिल्टर
कोरोनाबारे नयाँ तथ्य सार्वजनिक, कोठाभित्र १० मिटरभन्दा टाढासम्म फैलिने
आज एकैदिन काठमाडौं उपत्यकामा २३ जनामा कोरोना संक्रमण, २५५ नयाँ संक्रमित कहाँ– कहाँका ?
क्रिकेटर गाँगुलीले भने - चार दिवसीय टेस्ट क्रिकेट उपयुक्त छैन
कास्कीमा थप १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ? हेर्नुहोस्
बलिउडका चर्चित निर्माता तथा निर्देशकको निधन
सरकारकै फर्मानले कोरोना संक्रमितको संख्या कम देखिएको यी चिकित्सकले गरे खुलासा